आजदेखि मौसम बदली, अबको मौसम कस्तो हुन्छ ? « Postpati – News For All
कुमार योन्जनको नयाँ म्युजिक भिडियो सार्बजनिक
नेता आदर्शलाई सचिवालय सदस्य बाँस्तोलाले गरे स्वागत
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका ५ निर्णय
बुद्ध एयरका दुई जहाज आकस्मिक अवतरण, के हो कारण ?
थबाङमा कोरोना संक्रमित शुन्य भएपछि नि:शुल्क खानानास्ता व्यवस्थापन तत्कालका लागि स्थगित
आजदेखि मौसम बदली, अबको मौसम कस्तो हुन्छ ?
फागुन १०, काठमाण्डौ । मौसमविदले आजदेखि फेरि मौसम बदली भएर पानी पर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
यतिबेला आकाश खुले पनि दिउँसोपख काठमाण्डौसहित देशका धेरै ठाउँको मौसम बदली हुने र पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
आजदेखि पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण मौसम बदली भएर केही ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद समिर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पश्चिमका एक, दुई ठाउँमा मेघ गर्जनसहित पानी पर्ने सम्भावना छ ।
काठमाण्डौसहित मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा पनि हल्का पानी पर्ने सम्भावना देखिएको उहाँले बताउनुभयो । मध्यका १-२ ठाउँमा र पूर्वका केही ठाउँमा पनि हल्का पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ । हिजो र अस्ति मौसम सफा भएको थियो ।
पानी पर्न रोकिएलगत्तै तापक्रम बढ्न थालेको थियो । अस्ति काठमाण्डौको अधिकतम तापक्रम २२ दशमलब ८ डिग्री सेल्सियस र हिजो २५ डिग्री सेल्यिससम्म पुगेको थियो । मौसम बदली हुँदा अबको एकदुई दिन फेरि तापक्रम घट्ने र अर्को हप्तादेखि लगातार जस्तै तापक्रम बढ्ने मौसमविद श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
देशभर कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? (सुचीसहित)
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ९ सय ९९ कोरोना संक्रमित
आज देशभर कहाँको अवस्था कस्तो छ ? [तीन दिनको पूर्वानुमानसहित]
दाङबाट जरायोको सिङसहित ३ जना परे प्रहरीको फन्दामा
ग्राण्डीका ‘बेस्ट डाक्टर’को मेडिकल लाइसेन्स नक्कली !
रवीन्द्र मिश्रको प्रस्ताव- संघीयता खारेजी, धर्म निरपेक्षाताबारे जनमतसंग्रह
देशभर बदली र वर्षा, कहाँ-कहाँ हुन्छ भारी वर्षा ?